Manangana Sehatra Fikarakarana Fampiatranoana Vahiny ny Mpiondana Teknolojiam-Baovao Ao Makedonia · Global Voices teny Malagasy
Natao Izany Ho Setrin'ny Fampakaran-Tsaran'ny Trano Fandraisam-bahiny Tafahoatra Amin'ny Super Cup
Voadika ny 29 Jolay 2017 5:09 GMT
Takelaby lehibe manambara ny lalao Super Cup ao Skopje. Ny iray eo ankavanana manasongadina hafatra nataon'ny mpanohana hoe: “90 minitra sy aretin-tenda. Ny sasany milaza azy ho fahadalàna, izahay kosa milaza azy ho sarobidy.” Saripikan'ny GV, CC-BY.
Hotontosaina ao Skopje, Makedonia amin'ny fahavalon'ny volana aogositra 2017 hoavy izao ny Super Cup andiany faha-42 an'ny United European Football Association (UEFA) ifanandrinan'ny Real Madrid, mpandresy tamin'ny Ligin'ny Tompondaka, sy ny Manchester United, tompondakan'ny Europa League. Antenaina hanemitra ny renivohitra makedoniana ny mpiondana avy any Espina sy Angletera sy avy amin'izao tontolo izao ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Nanapa-kevitra ny haka volabe amin'izy ity ny indostrian'ny fandraisambahiny sy ny fihinanankanina. Fotoan-Dehibe. raha te-hitoetra ao Skopje ianao anelanelan'ny 7 ka hatramin'ny 9 aogositra, dia mila mandoa 500 ka hatramin'ny 3500 Euro. Ho fampitahana, ny saran'ny hotely mahazatra dia anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 75 Euro isan'alina.
Pikantsarin'ny sasantsasany amin'ireo Airbnb fikarakarana fampiantranoana olona isafidianana ao Skopje mandritra ny faran'ny herinandron'ny Super Cup.
Misy amin'ireo milaza tena ho vahiny avy any Fanjakana Mitambatra na Espaina no nanambara fa namandrika fandraisam-bahiny tany an-tanàna na firenena manodidina mihitsy aza ry zareo, ary rehefa hijery ny lalao ihany vao mankany Skopje.
и лош маркетинг за у иднина. (@b0stan) July 4, 2017
Haaa, handany ny alina any Sofia sy Thessaloniki ny mpiondana fa lafo loatra i Skopje. Ankehitriny ry vahoaka tendan-kanina, izany no atao hoe tsy mahay manararaotra sy manome laza ratsy ho an'ny ampitso.
Ho setrin'izany fiakaran'ny sara tafahoatra izany dia misy ireo olom-pirenena ao Skopje nanapa-kevitra hanolotra fandriana maimaim-poana ao an-tranon-dry zareo ho an'ireo mpiondana football efa manana tapakilan'ny lalao. Lasa lavitra kokoa aza ireo tanora matihanin'ny Teknolojiam-Pifandraisana sy ny Haivarotra izay miantso ny tenan'izy ireo ho ‘We Talk IT Community’ hampiasa ny talentany hanangana sehatra ahafahan'ny mpiondana Manchester United sy Real Madrid mifandray amin'ireo olona mikarakara fandraisana maimaim-poana mandritra ny alina iray na roa: supercupskopje.com. Tsotra ny servisy: mampifandray ireo mpiondana football avy amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao amin'ireo Makedoniana afaka manome fandriana maimaim-poana.
The story behind https://t.co/l3XZcnbDF2 and why we need your support even more! #SuperCup #SuperCupSkopje #WeTalkIT https://t.co/xp1xUrpiJ5
Ny tantara ao ambadika sy ny antony itadiavanay fanohanana bebe kokoa avy aminareo!
Manazava ny fizotrany nandritra ny antsafa nifanaovana tamin'ny Global Voices i Anita Kirkovska, mpikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina We Talk IT:
Anita Kirkovska. Sary nahazoana alalana avy aminy.
Anita Kirkovska (AV): We built this platform on a weekend hackathon, in like 48 hours. We knew that the match is going to b? held in two weeks, so we wanted to offer a solution as fast as we could. All of the members in the We Talk IT community are tired of everyone just complaining about the challenges we have as a country, so we wanted to act for a change. The burden that the hoteliers put on Skopje again, we were working on getting it fixed. And now, we are doing that, 20 listings a day. Good people of Macedonia, you rock!
Anita Kirkovska (AV): Nanangana ity sehatra ity tao anatin'ny faran'ny herinandro tsy mitsahatra izahay, amin'ny endrika 48 ora. Fantatray fa hotontosaina afaka tapa-bolana ny lalao, ka dia naniry izahay hanolotra vahaolana haingana araka izay azonay natao. Leon'ny fahitana ny rehetra mitaraindraina amin'ny fanamby atrehinay amin'ny maha-firenena anay ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina We Talk IT, ka nihetsika izahay hisian'ny fiovana. Ny vesatra izay napetraky ny tompontrano fandraisambahiny tamin'i Skopje indray, efa eo andalam-pamahana olana izahay amin'izao fotoana izao. Ary efa misy ny vitanay amin'izao fotoana izao, lisitra 20 isan'andro. Mahery ianareo ry olombelona tsaran'i Makedonia!
Ny fotokevitry ny sehatra dia ny mba ho mpanome vaovao sy hiasa amin'ny maha-mpanelanelana azy, koa ifanarahana ivelan'ny sehatra ny antsipirian'ny fikarakarana ny fandraisana, eo amin'ny mpampiatrano sy ny vahiny, atao amin'ny alalan'ny mailaka. Na izany aza dia tetikasam-pirotsahana antsitrapo open source io. Tsy tompon'andraikitra eo amin'ny fifaneraseran'ny mpampiatrano sy ny vahiny izahay, koa mandrisika azy ireo izahay hahay hitsara ary hitandro ny filaminana ao an-tsaina rehefa mampiasa ny servisinay.
Tetikasa open source ny sehatra ary afa-mandray anjara amin'ny fanatsarana azy ny rehetra.
Nalaza an-tserasera ny sehatra ora vitsy taorian'ny nisokafany. Hatramin'ny faran'ny andro voalohany dia montsana ny lohamilin-dry zareo. “Tsy fantatray loatra izay nantenaina na hoe ho tahaka ny ahoana ny fihetseham-pon'ny olona manoloana azy ity. Azo itokisana fa nahazo tamberina miiba izahay, saingy nôrmaly izany,” hoy i Anita, ary nanampy fa nahazo fifantohana avy amin'ny seha-baovao lehibe mahasahana ny firenena sy ny fampitam-baovao nomerika ry zareo.
Hatramin'izao fotoana [anoratana ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy izao] dia manana lisitra 50 vonona ahitana fandriana vonona mihoatra ny 100, nahazo fizaram-pejy mihoatra ny 2000 tao anatin'ny telo andro ry zareo. Hatramin'ny 27 jolay, nanamafy ny fahavononan'ny fandraisana vondrona mpiondana miisa roa ny mpandray vahiny avy ao amin'ny sehatra We TalkIT.
Tsy ny fiakaran'ny saran'ny trano fandraisam-bahiny mahatonga ny Britanika sy ny Espaniola mpiondana hahatsapa ho ‘rovitra’ ihany no olana atrehin'ny mpikarakara ny Super Cup. Na dia efa fantatry ny manampahefana hatramin'ny jona 2015 aza fa hotontosaina ao Skopje ny Super Cup, dia mbola maro ihany ny fanahiana teo amin'ny manampahefanan'ny UEFA nanao fitsidihana tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity eo amin'ny fahavononan'ny kianja handray lalao amin'izao haavony izao.
Mandritra ny volana jona 2017 ihany koa i Makedonia dia ao anatin'ny tetezamita mizotra mankany amin'ny fananganana governemanta vaovao. Nilaza vao haingana i Dragi Rashkovsk, sekreteram-panjakana fa hanao izay tratry ny heriny ry zareo hamaha ny fanamarihana rehetra nataon'ny manampahefanan'ny UEFA sy hikarakara ny Super Cup hotontosaina ao Skopje mankany amin'izay tena tomombana indrindra.
Nitsiker afatratra ireo lahatsary fampiroboroboana ny Super Cup ny tao amin'ny media sosialy. Misy aza moa ireo sehatra fampitam-baovao no miezaka mandoko ny lahatsary navoakan'ny Federasionan'ny Football Makedoniana ho votoaty ofisialin'ny UEFA manandratra ilay tetikasa mampiadihevitra Skopje 2014, izay narafitra hanome endrika vaovao ny renivohitr'i Makedonia ho ‘renivohitry ny kitsch‘ quasi-baroque ao Eoropa.
Nahazo tsikera ho ‘mamirapiratra’ loatra ihany koa ny lahatsary fampiroboroboana faharoa kosa, izay navoakan'ny tanànan'i Skopje. Manolotra ireo toerana itazanana, ihinanana sy isotroana ity raki-tsary maharitra iray minitra sy 42 segondra ity:
Mifangarika amin'izany kosa, manome torohevitra mifandraika amin'ny zavamisy ho an'ireo mpiondana football amin'ny alalan'ny Facebook, izay nahazo ekeko an-jatony sy fanapariahana ampolony kosa ny olom-pirenen'i Skopje iray:
13. Cars will not stop for you on the zebra. You have to wait.
1. Tsy mamely ny fitateram-bahoaka. Mila manavatsava ny helo ara-panjakana ianao raha te-hitaingina indray. Tsy afa-mandoa vola ao anaty bus ianao ary ho volabe no aloanao raha tratra tsy manana tapakila ianao.
2. Mora ny taxi raha manana fandrefesana ry zareo, ireny aza no aleo ampiasaina.
3. Alohan'ny amin'ny sivy ora alina ihany no ahafahanao mividy [zava-pisotro misy] alikaola.
4. Mikatona amin'ny iray maraina ny Bara, ary hatramin'ny telo maraina ny clubs.
5. Ny toera-pilokana andalambe ihany sisa no misokatra aorian'izany.
6. Matetika ry zareo manolotra labiera an-tavoahangy kely.
7. Amin'ny 11 alina ny trano fihinanankanina no mandray komandy farany.
8. Tsy misy club strip/sex/swing eto Skopje.
9. Tsy misy fivarota-tena ara-dalàna eto Skopje. Tsy afa-mandrisika ireo mpiasa eny an-dalambe [izahay].
10. Tsy misy efitra fidiovana ho an'ny daholobe eto Skopje.
11. Alaviro lavitra ireo andian'alika mirenireny.
12. Alaviro lavitra ny bozaka, feny tain'alika eny.
13. Tsy hijanona amin'ny tsipika zebra fiampitana aminao izany ny fiara. Miandry aloha ianao.
14. Mahafinaritra ny fanehoam-pitiavana eny ankalamanjana, raha tsy hoe pelaka ianao.
15. Hazain'ny polisy manokana manao fanamiana sivily ny mpandrongony. Mitandrema amin'ny fampiasana azy eny ankalamanjana.